Dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka is-garab socday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaasi ay baalmarsan yihiin hannaankii doorasho ee wasaraddu horey u shaacisay, waxayna wasaaraddu doorashooyinkaas ku tilmaantay kuwo is-caleemo-saar ah.
Doorashooyinka shalay ka dhacay Kismaayo ayaa mid ka mid ah waxaa lagu doortay Madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo tan kalena lagu doortay Cabdirashiid Maxamed Xiddig oo ah xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Beesha caalamka oo ay ku jiraan ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay iyo ururka Midowga Afrika ayaa ugu baaqay dhinacyada ku sugan magaalada Kismaayo inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara iska horimaad.
Doorashada Jubbaland ayaa u muuqata inay sii kala fogaysay dawladda Federaalka iyo hoggaamiyaha maamulka Axmed Madoobe. Waxaa kale oo maalmihii lasoo dhaafay soo baxay in doorashada ay ku kala aragti duwan yihiin waddamada deriska ah gaar ahan Kenya iyo Itoobiya.
Ma cadda halka ay xaaladda Jubbaland halkan uga dhaqaaqi doonto kadib doorashooyinkan dhacay iyo diidmada dawladda Federaalka ee ah inay aqoonsato natiijada.